/ब्लग/ग्यालरी/ओर्लिस्टेटले वजन घटाउने औषधिको रूपमा कसरी काम गर्दछ?
प्रकाशित 03 / 02 / 2020 by 阿斯劳 मा लेखियो ग्यालरी.
विश्व जनसंख्या समीक्षाको तथ्या .्कका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसको जनसंख्यामा मोटोपनाका लागि विश्वव्यापी १२ औं स्थान ओगटेको छ। रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी) को अनुमान छ कि २० 12 वर्ष उमेर भन्दा माथिका अमेरिकी वयस्कहरु मध्ये .36.9 20..2016% मोटोपनाल छन्, २०१ XNUMX मा संकलित तथ्या .्कको आधारमा।
आधिकारिक तथ्या .्कले देखाए कि of१.१% महिला, र .41.1 37.9..160% पुरुष - वा १ XNUMX करोड भन्दा बढी अमेरिकीहरू मोटाईको साथ संघर्ष गरिरहेका छन्। हालको तथ्या्कले अमेरिकी जनसंख्यामा विगत तीस बर्षमा मोटाई दोब्बर देखाउँदछ।
दुर्भाग्यवस, डाटा अमेरिकी युवाहरूको लागि धेरै राम्रो देखिँदैन, कि त। लगभग १ te% सबै किशोर र बच्चाहरू या त बढी तौल वा मोटा छन्, जुन सन् १ 15 s० को तुलनामा तीन गुणा बढी छ।
स्टेट अफ मोटापेसीको तथ्या .्क, व्यवहार जोखिम कारक निगरानी प्रणाली (बीआरएफएसएस) को पछिल्लो तथ्या .्कले देखाउँदछ, नौ राज्यमा es 35% भन्दा बढीको मोटापाको स्तर छ। कन्सास, फ्लोरिडा, न्यू मेक्सिको, यूटा, मिसौरी, मिनेसोटा र न्यू योर्क सबैले २०१ and र २०१ in बीच मोटापाको दर वयस्कहरू र बच्चाहरूमा बढेको देख्यो। (१,२)
त्यसोभए, किन अमेरिकाले मोटोपनाको महामारीको सामना गर्दै सम्पूर्ण देशभरि वयस्कहरू र बच्चाहरूलाई असर गरिरहेको छ? मोटोपनासँग खराब जीवनशैली विकल्पहरू र आहार बानीसँग कडा लिंकहरू छन्। बच्चाहरूले बाहिर १ the s० को दशकमा भन्दा कम खेल्छन्, टेक्नोलोजीमा भिडियो भिडियो गेम र मनोरन्जनका अन्य प्रकारहरू प्रस्तुत गर्दछ जुन बच्चाहरूलाई आसीन राख्छ।
वयस्कसँग मनोरन्जन र खाना वितरण सेवाहरू सहज रूपमा चौबीसै घण्टा उपलब्ध छन्। हाम्रो जीवनमा सबै थप सुविधाले क्यालोरीहरूको अधिक खपत थप गर्दछ, र पर्याप्त ऊर्जा सेवन जलाउन पर्याप्त व्यायाम छैन।
तपाईंको ऊर्जा आवश्यकताको लागि धेरै क्यालोरीहरू खाँदा शरीरमा पुग्दछ, मोटोपना ऊर्जालाई फ्याटको रूपमा भण्डारण गर्दछ। खराब जीवनशैली विकल्पहरू, क्यालोरी-घना आहार जुन कार्बोहाइड्रेट र नराम्रो बोसोको मात्रामा अधिक हुन्छ, र व्यायाम गर्न थोरै, मोटापाको लागि एक विधि हो - यो सबै ले समय लिन्छ।
1. Orlistat के हो?
मोटोपनाले प्रभावित व्यक्तिको जीवनको गुणस्तरलाई सीमित गर्दछ। यद्यपि धेरै अमेरिकीहरूले महसुस गरे कि अत्यधिक तौलले उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ, धेरैले थोरैले मोटाईमा आफ्नो प्रगति रोक्न केहि गर्ने निर्णय गर्छन्।
धेरै वजन र मोटो व्यक्तिहरूमा शरीर परिवर्तन र क्यालोरी-प्रतिबन्धात्मक आहार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ज्ञान र अनुशासनको अभाव हुन्छ। तीनीहरूको लागि जुन शरीर परिवर्तन गर्न थाल्छ, goal% भन्दा कमले आफ्नो लक्ष्य वजन प्राप्त गर्न व्यवस्थित गर्दछ।
वास्तविकता यो हो कि जब तपाई अत्यधिक तौल वा मोटो हुन्छन् तब शरीरको अधिक बोसो गुमाउनु नै चुनौती हो जुन केहीले हटाउन सक्ने देखिन्छ। जीवनशैलीको बानी बदल्दै, खाना परिवर्तन गर्ने, र व्यायाम योजना सुरू गर्न मोटो व्यक्तिको तर्फबाट समर्पणको एक महत्त्वपूर्ण मात्रा आवश्यक पर्दछ।
मार्गदर्शन र प्रेरणा बिना, मोटो व्यक्तिले उनीहरूको शरीर परिवर्तनको साथ प्रेरणा गुमाउँछ, तिनीहरूलाई स्व-विनाशकारी बानीहरूमा पछाडि फर्काउँछ।
पछिल्लो २० वर्षमा पौष्टिक विज्ञानमा भएका प्रगतिहरूले मोटापाको प्रबन्ध र उपचारको लागि फार्माकोलजिकल समाधानमा केही रोचक र रोमाञ्चक सफलताहरू उत्पादन गरे। फार्मा अनुसन्धानको "पवित्र ग्रिल" भनेको एक वजन घटाउने गोली बनाउने हो जसले मोटो व्यक्तिलाई शरीर स्वस्थ बीएमआईमा फर्काउन अनुमति दिन्छ।
तपाईलाई कुनै पनि पोषणविद् वा डाक्टरको बारेमा शंका लाग्न सक्छ जसले तपाईंलाई मोटोपनाको लागी एक प्रभावकारी वजन घटाउने औषधि रहेको बताउँछ।
Orlistat, अन्यथा अल्ली र Xenical को यसको ब्रान्ड नामहरू द्वारा परिचित, चमत्कारी तौल घटाउने औषधि हुन सक्ने सम्भाव्यता छ जुन मोटो व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्यको लागि आफ्नो शरीरलाई पुनर्स्थापना गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।
अधिक वजन व्यक्तिहरूले list०mg (Alli) मा काउन्टरमा Orlistat खरीद गर्न सक्दछन्। १२०mg (Xenical) संस्करणलाई खरीद र प्रयोगको लागि डाक्टरको पर्ची आवश्यक छ। त्यहाँ धेरै जेनेरिक संस्करणहरू अनलाइन उपलब्ध छन्।
अर्लिस्ट्याट एक औषधि हो जुन एक व्यक्तिको आहार र व्यायाम कार्यक्रमको पूरक हो। त्यसकारण हामी यसलाई चमत्कारी तौल घटाउने गोली भन्न सक्दैनौं किनकि यसलाई अझै पनि प्रयोगकर्ताले आफ्नो आहार र व्यायाममा केही प्रयास गर्नु आवश्यक छ।
जहाँसम्म, प्रयोगकर्ता रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ कि ओर्लिस्ट्याट वजन घटाउने गति बढाउनको लागि अत्यन्त प्रभावकारी औषधि हो जब मोटो व्यक्तिको आवश्यकताको लागि सही पोषण र व्यायाम दिशानिर्देशहरूको साथसाथ प्रशासित गरिन्छ।
१ 18 बर्ष भन्दा माथिका वयस्कले काउन्टरमा m०mg Orlistat ट्याब्लेटहरू किन्न सक्छन्, यदि उनीहरूसँग २ Mass वा माथि उमेरका बडी मास इंडेक्स (BMI) छ भने। बीएमआईको साथ BM० भन्दा बढि संग गम्भिर मोटो व्यक्तिहरूले आफ्नो डाक्टरलाई भेट्न सक्छन् १२० मिग्रि ओर्लिस्ट्याट ट्याब्लेटको प्रिस्क्रिप्सनको लागि संयोजनको साथ प्रयोग गर्नका लागि वजन घटाउने आहार.
डाक्टरहरूले १२० भन्दा कम बीएमआई भएका व्यक्तिहरूमा १२०mg संस्करणको प्रयोगलाई पनि अनुमोदन गर्न सक्दछन्, यदि उनीहरूले मधुमेह वा उच्च रक्तचाप जस्ता अन्य स्वास्थ्य विकारहरूसँग पनि व्यवहार गरिरहेछन्। मेडिकल प्रोफेशनलको सुपरिवेक्षणमा ओर्लिस्ट्याट प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले औषधिको लागत तिर्नु पर्दछ।
यद्यपि, सबै बीमा कम्पनीहरूले उपचारलाई कभर गर्न सक्दैनन्। एक Orlistat आपूर्तिकर्ता अनलाइन खोज अपेक्षाकृत सजिलो छ, र अनलाइन विक्रेताहरु को लागी Orlistat मूल्य दिशानिर्देश, प्रतिष्ठा र गुणवत्ता मा निर्भर गर्दछ।
त्यसो भए, कसरी Orlistat काम गर्दछ?
अर्लिस्ट्याटले GI पथलाई तपाइँले खाएको खानामा फ्याट ग्रहण गर्न रोक्दछ। नतिजाको रूपमा, तपाईंको आहारमा अनबसोर्ब्ड फ्याट तपाईंको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रणालीमा जान्छ, जहाँ शरीरले मलको पदार्थको साथ उत्सर्जन गर्दछ।
कार्बोहाइड्रेट र प्रोटीनमा प्रत्येक ग्राममा-क्यालोरी उर्जा हुन्छ। जहाँसम्म, एक ग्राम फ्याटमा--क्यालोरी हुन्छ। त्यसैले, पछाडि विचार ओर्लिस्ट्याटको प्रयोग मोटोपना व्यक्तिहरूलाई यस क्यालोरी-घना पोषण ग्रहण गर्नबाट रोक्न हो।
मोटो व्यक्तिहरू सामान्यतया उच्च-फ्याटयुक्त आहार खान्छन्, र तिनीहरूको खाना छनौटहरू स्वस्थ हुँदैनन्। क्यालोरिक सेवन प्रतिबन्धित गरेर र मोटो व्यक्तिको आहारलाई स्वस्थ विकल्पहरूमा परिवर्तन गरेर, अधिक वजन भएका व्यक्तिहरूले तुरुन्त हप्तामा हप्ताको परिणामहरू देख्न थाल्छन् उनीहरूको शरीर परिवर्तनमा।
जे होस्, गम्भिर मोटो व्यक्तिहरूले स्वस्थ बीएमआईमा फर्कनु अघि आहार, व्यायाम र जीवनशैलीका कारकहरूमा परिवर्तन गर्न समर्पित प्रतिबद्धताको to देखि-बर्षसम्म लिन सक्दछ।
यस परिमाणको वजन घटाउने रूपान्तरणमा स्थिर रहनु कुनै पनि मानवको लागि चुनौतीपूर्ण छ। तसर्थ, गम्भिर मोटो व्यक्तिहरूले परिणामहरू छिटो बनाउन ओर्लिस्ट्याटको प्रयोगले उनीहरूको आहार र व्यायाम कार्यक्रमलाई पूरक बनाउन सक्छ।
2. के Orlistat FDA द्वारा प्रयोगको लागि सुरक्षितको रूपमा स्वीकृत गरिएको छ?
कुनै पनि औषधि जस्तै, ओलिलिस्टा एफडीए द्वारा सावधानीपूर्वक विश्लेषण र परीक्षणको माध्यमबाट गयो। Orlistat FDA स्वीकृति CAS नम्बर अन्तर्गत १ 1999 XNUMX। मा भयो 96829-58-2.
एफडीएले १ 1999 XNUMX। को अवधिमा क्लिनिकल परीक्षणमा औषधीको ब्रान्डेड संस्करणहरूको परीक्षण गर्‍यो, एक तालिम प्राप्त मेडिकल पेशेवरको मार्गदर्शनको साथ प्रयोगका लागि उपयुक्त औषधीको जेनिकल संस्करणलाई अनुमोदन गर्‍यो। यद्यपि यो नोट गर्नु महत्वपूर्ण छ कि Xenical केवल प्रिस्क्रिप्शन अन्तर्गत मात्र उपलब्ध छ।
एफडीएले १i बर्ष भन्दा बढी उमेरका अधिक वजन भएका व्यक्तिको लागि सुरक्षितको रूपमा Alli (m०mg Orlistat) लाई अनुमोदन गर्‍यो। जे होस्, m०mg संस्करण काउन्टरमा खरीदको लागि उपलब्ध छ। जबकि ओटीसी संस्करण क्यालोरी-प्रतिबन्धात्मक, कम फ्याट डाईटको साथ प्रयोगको लागि हो, त्यहाँ मार्गदर्शनको कुनै आधिकारिक प्रमाण छैन जब बढी तौलका व्यक्तिहरू Orlistat किन्नुहोस् काउन्टर माथि।
एफडीएले Alli र Xenical, Orlistat को ब्रांडेड संस्करणको प्रयोगकर्ताहरु मा प्रतिकूल प्रभाव को सबै रिपोर्ट ट्र्याक गर्छ। एजेन्सीले साइड इफेक्ट र औषधीको प्रयोगको समयमा हुने प्रतिकूल स्वास्थ्य घटनाहरूको बारेमा प्रयोगकर्ताहरूबाट हजारौं सूचनाहरू प्राप्त गर्‍यो।
यस धेरै प्रतिकूल स्वास्थ्य रिपोर्टको साथ, यसले केही सम्भावित प्रयोगकर्ताहरूलाई टाढा डराउन सक्छ यसलाई एक वजन घटाउने कार्यक्रममा समावेश गरेर। यद्यपि वास्तविकता भनेको एफडीएलाई सार्वजनिक गरिएको रिपोर्ट गरिएको प्रतिकूल स्वास्थ्य घटनाहरू केवल अल्ली र क्जेनिकलसँग मात्र हो, खास गरी ओर्लिस्टेटसँग होइन।
आजको मितिमा कुनै क्लिनिकल प्रमाण छैन कि ओलिस्ट्याट एल्ली र क्सीनिकल प्रयोगकर्ताहरूले भोग्नु परेको प्रतिकूल स्वास्थ्य घटनाहरूको लागि जिम्मेवार छ। यो पूर्ण सम्भव छ कि यी समस्याहरू औषधीको निर्माणमा प्रयोग हुने अर्को घटकबाट आउन सक्दछन्।
एफडीए साइड इफेक्ट र मुद्दाहरू अनुसन्धान गर्न जारी Alli र Xenical को उपयोग वरिपरि विषाक्तता संग। यद्यपि यसले औषधिहरूको सुरक्षा र अनुमोदन बन्द गर्नका बारे कुनै विज्ञप्ति जारी गरेको छैन।
एफडीएसँग पनि यस तथ्यमा केही चिन्ता छ कि यसले प्रत्येक १० प्रतिकूल घटनाहरू मध्ये केवल १ मा रिपोर्ट प्राप्त गर्दछ। एजेन्सीले २०० All मा प्रयोगकर्ताहरूमा अल्लीको कलेजोको विषाक्ततामा परीक्षण पनि ल्यायो।
परीक्षणहरूमा क्लीनिकल, क्लिनिकल, पोष्ट-मार्केटिंग, र Xenical ब्रान्ड औषधीको प्रयोगको कारण गम्भीर कलेजोको विषाक्तता र चोटका साथ सम्बन्धित औषधि उपयोग डेटाको विश्लेषण समावेश थियो। ())
अध्ययनको नतीजाले निष्कर्ष निकाल्यो कि Xenical लाई कडा कलेजोको विषाक्तता वा चोट पुर्‍याउनको लागि कुनै लिंक छैन।
यद्यपि एफडीएले जेनेकलको कारण हुने कलेजोमा हुने चोटपटकसँग सम्बन्धित मार्केट विश्लेषण पश्चात १२ वटा घटना पत्ता लगाएको हो र एउटा एल्लीको प्रयोगको साथ हो। प्रमाणको थप अध्ययनले देखाउँदछ कि अन्य योगदान कारकहरू, जस्तै निर्जलीकरण, र अफ-लेबल वा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्रयोग, यी मामिलाहरूमा गम्भीर कलेजोको चोटको कारणको लागि जिम्मेवार हुन सक्छ। ())
3. ओसारलिट एक वजन घटाउने औषधि को रूप मा
अर्को पटक तपाईं आफ्नो स्थानीय GNC मा पूरक Aisle तल जाँदै हुनुहुन्छ, फ्याट घाटा सेक्सनमा हेर्नुहोस्। तपाईंले दर्जनौं वजन घटाउने उत्पादनहरू पावर र गोली स्वरूपमा फेला पार्नुहुनेछ। को वजन घटाने पूरक व्यवसाय एक अरबौं डलरको उद्योग हो, र त्यहाँ धेरै ब्रान्डले यस स्थानलाई प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेका छन्।
यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि ओर्लिस्ट्याट तौल घटाउने औषधि हो, तौल घटाउने पूरक होईन। यदि तपाईं धेरै धेरै वजन घटाउने पूरक आहार लिनुहुन्छ भने, तपाईंले केही हल्का थर्मोजेनिक साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै पेट दुख्ने वा उत्तेजना र तापमानमा हल्का वृद्धि।
जे होस्, एक औषधिको दुरुपयोग वा दुरुपयोग वजन घटाने औषधि, जस्तै Orlistat, गम्भीर प्रतिकूल साइड इफेक्ट हुन सक्छ कि एक विस्तारित अवधि को लागी तपाइँको कल्याण असर गर्न सक्छ।
Orlistat राम्रोसँग काम गर्दछ, र केही प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको नतिजा बढाउनको लागि उनीहरूको प्रोटोकल बढाउने निर्णय गर्न सक्दछन्। यद्यपि यो रणनीति निश्चित छ कि प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको स्वास्थ्यको साथ केही गम्भीर समस्यामा ल्याउने छ। मेडिकल सुपरिवेक्षणको साथ मात्र Orlistat प्रयोग गर्नुहोस्, विशेष गरी यदि तपाईं १२०mg ढाँचा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
A: ओर्लिस्टेट लिई कसरी वजन कम गर्ने?
ओसारलिटको प्रयोगलाई तौल घटाउन लागू गर्ने क्रममा, प्रयोगकर्ताले मेडिकल डाक्टरको सल्लाह अनुसरण गर्नुपर्छ, विशेष गरी जब औषधिको १२०mg ढाँचा प्रयोग गर्दा। व्यक्तिले आफ्नो वजन घटाउने कार्यक्रम सुरु गर्नु अघि, उनीहरूसँग सफल शरीर परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्न सही मानसिकता हुनु आवश्यक छ।
अधिक वजन वा मोटो व्यक्तिले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि औषधि उनीहरूको समस्याहरूको जवाफ होइन। पर्याप्त दीर्घकालीन वजन घटाउने एक मात्र समाधान आहार, जीवनशैली अभ्यास, र एक स्थिर व्यायाम कार्यक्रम को परिचय को समायोजन माध्यम हो।
यो मानसिकता बिना, मोटो वा बढी वजन व्यक्ति अन्ततः औषधीको अत्यधिक प्रयोगमा झुकाव गर्ने प्रयास गर्दछ जब उनीहरूले उनीहरूको प्रयासबाट चाहिने परिणामहरू देख्दैनन्। यो वजन घटाउने औषधिको अधिक प्रयोगमा गम्भीर दुष्प्रभावहरूको विकास समावेश हुन सक्छ जसले प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ।
कुनै पनि ढाँचामा ओर्लिस्टेट प्रयोग गर्दा, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले कन्टेनरमा सूचीबद्ध खुराक निर्देशनहरू पालना गर्नुभयो, वा फार्मासिष्टले औषधि पठाउँदै। Orlistat खुराक व्यक्तिको BMI को आधारमा भिन्न हुन सक्छ। जबकि, निर्धारित भन्दा लामो औषधि लिनुहोस्, वा उत्पाद प्याकेजि in घुसाउनुहोस्।
मोटोपना र अधिक तौलका व्यक्तिहरूले ओरलिस्टेटलाई विशेष, कम फ्याट, क्यालोरी-प्रतिबन्धात्मक आहारको साथ प्रयोग गर्न सक्दछन्। जब एक व्यक्ति को आहार योजना को संरचना, पोषण विशेषज्ञहरु ले पनी सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि कुनै पनि खाना मा कुल क्यालोरी को 30% भन्दा बढी को लागि लेखा छैन।
मोटो व्यक्तिले तिनीहरूको आहार र व्यायाम योजनाको पालना गर्नुपर्दछ, र तिनीहरूको चिकित्सकको निर्देशन अनुसार अर्लिस्ट्याट डोज गर्नुपर्दछ। धेरै खुराक प्रोटोकल दिन भर औषधि को तीन खुराक बराबर दूरी छुट्याउँछ।
यदि प्रयोगकर्ताले खाना छोड्छ भने, त्यसोभए तिनीहरूले त्यो खानाको लागि आवश्यक ओर्लिस्ट्याट खुराक पनि छाड्नुपर्नेछ।
यदि तपाइँ खाना छाड्नुहुन्छ वा तपाइँ खाना खान गर्नुहुन्छ जुनमा कुनै बोसो हुँदैन, त्यो खानाको लागि तपाइँको ओर्लिस्टाट डोज छोड्नुहोस्। प्रयोगकर्ताले खानामा पोषण लेबलमा पनि ध्यान दिन सुरु गर्नुपर्छ। घटक र पोषक सूचीबद्धको मार्फत पढ्नुहोस्, र उच्च फ्याटयुक्त खाद्य पदार्थहरू वेवास्ता गर्नुहोस्।
Orlistat ले तपाईंको आहारमा पानीमा घुलनशील भिटामिनको उचित शोषणमा हस्तक्षेप पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण, बिरामीहरूले उनीहरूको डाक्टरलाई भिटामिन ब्रान्ड सिफारिस गर्न लगाउनु पर्छ जुन उनीहरूले औषधि प्रयोग गर्दा अवशोषित गर्न सक्दछन्।
प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको खुराक र औषधिको प्रयोगको पनि अनुगमन गर्नुपर्छ। Orlistat एक औषधि हो जुन अफ स्क्रिप्टको दुरुपयोगको सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण, अन्य व्यक्तिले तपाईंको औषधिमा डुब्न सक्छन् यदि तपाईं आफ्नो प्रयोगमा ध्यान दिनुहुन्न।
कम्तिमा २ घण्टा पहिले कुनै पनि पूरक वा अन्य औषधीहरू ओर्लिस्ट्याटको तपाईंको डोज लिनुहोस्। यो खुराक रणनीति तपाइँले प्रयोग गरिरहनु भएको अन्य औषधिहरूको कुनै प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरूलाई रोक्दछ। यदि तपाईं औषधिको कुनै अन्य प्रकारमा हुनुहुन्छ भने, यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले ओर्लिस्ट्याट प्रयोग गर्नु अघि आफ्नो चिकित्सकलाई बताउनु भएको छ।
B: अर्लिस्ट्याट प्रयोग गर्दा मैले के बेवास्ता गर्नुपर्दछ?
जब तपाइँको स्वास्थ्य र मोटोपना लाई हराउने तपाइँको योजनाको बारेमा तपाइँको डाक्टर संग परामर्श जब, तपाइँ आफ्नो चिकित्सक संग सबै अन्य स्वास्थ्य मुद्दाहरु को बारे मा छलफल सुनिश्चित गर्नुहोस्। डाक्टरलाई तपाईंले ओर्लिस्ट्याट लिनुभन्दा पहिले तपाईंले लिनुहुने सबै औषधीहरूको बारेमा सचेत हुनु आवश्यक छ।
केहि औषधिहरूले अन्य औषधिहरूसँग contraindication निम्त्याउन सक्छ, प्रयोगकर्तामा गम्भीर साइड इफेक्टको परिणामस्वरूप। तपाइँले तलका कुनै पनि औषधिहरूको प्रयोगको बारेमा तपाइँको डाक्टरलाई सूचित गर्नुपर्दछ।
मौखिक मधुमेह औषधि वा इन्सुलिनको प्रयोग
साइक्लोस्पोरिन (स्यान्डिमुन, नियोरल, गेनग्राफ)
डिगोक्सिन (ल्यानोक्सिन, डिजिटलिस, ल्यानोक्सिकैप्स)
लेवोथिरोक्साइन (लेभोक्सिल, सिंथ्रोइड, लेवोथ्रोइड)
रक्त पातलो औषधिहरू जस्तै वारफेरिन (कुमाडिन)
यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यो औषधिहरूको एक विस्तृत सूची होईन जुन ओर्लिस्टेट प्रयोगको साथ जटिलताको कारण हुन सक्छ।
तपाइँको डाक्टरसँग भेटेर तपाइँको सबै औषधि औषधीहरू, पूरकहरू, र अन्य ओटीसी उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाइँ ओर्लिस्टेट प्रयोग गर्दा काउन्टर अन्तर्क्रियाको कारण हुन सक्छ।
कुनै पनि परिस्थितिमा तपाईंले गर्नु हुँदैन Orlistat लिनुहोस् एक चिकित्सा पेशेवर पहिले परामर्श बिना। जबकि m०mg संस्करण ओटीसी प्रयोगको लागि सजिलैसँग उपलब्ध छ, प्रयोगकर्ताले अझै पनि उनीहरूको आहार र व्यायाम योजनामा ​​थप्नु अघि मेडिकल पेशेवरसँग परामर्श गर्नुपर्छ।
जब उच्च खुराकमा वा लामो समयसम्म लिईन्छ, ओर्लिस्ट्याटले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। ती व्यक्तिहरू जसले सोच्दछन् कि तिनीहरूले ओर्लिस्ट्याटमा प्रयोग गरेको हुन सक्छ विषको सहयोग हटलाइन तुरून्त कल गर्नुपर्दछ र एम्बुलेन्सको लागि कल गर्नुपर्दछ।
बिरामीहरूले ओर्लिस्टेट लिनबाट बच्नु पर्छ यदि उनीहरूसँग औषधीमा सामग्रीहरूमा कुनै एलर्जी छ। यदि तपाईं निम्न मेडिकल सर्तहरू मध्ये कुनैसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भने ओर्लिस्ट्याट लिनुहोस्।
क्रोनिक मालाब्सर्प्शन सिन्ड्रोम
मधुमेह प्रकार I वा II
एरोरेक्सिया वा बुलिमिया जस्ता खानाहरूका विकारहरू
यदि हाल कुनै अन्य वजन घटाउने औषधि वा ओटीसी उत्पादनहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने
4. ओर्लिस्ट्याट प्रयोगबाट तपाईं के प्रभावहरू अपेक्षा गर्न सक्नुहुनेछ?
व्यक्तिहरूको लागि यो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ कि "चमत्कारी तौल घटाउने औषधि" जस्तो केहि छैन। जबकि ओललिस्टेटको उपयोग क्यालोरी-प्रतिबन्धात्मक आहार र व्यायाम कार्यक्रमको साथ मोटे र बढी तौल भएका व्यक्तिको वजन घटाउनेछ, तिनीहरू प्रक्रियाको साथ व्यावहारिक अपेक्षा राख्नु पर्छ।
Orlistat प्रभावहरू व्यक्ति-व्यक्तिमा फरक फरक हुन सक्छ, र किनभने प्रत्येक व्यक्तिको अद्वितीय चयापचय र शरीरको प्रकार छ। यद्यपि, तपाईं बोसो घाटाको दर मध्यम हुने आशा गर्न सक्नुहुनेछ, र औषधि प्रयोग गर्नाले तपाईंलाई आहार र व्यायाम रणनीतिहरू भन्दा एक सातामा केही पाउन्ड बढी साटा गर्न मद्दत गर्दछ।
जहाँसम्म, द्रुत बोसो घाटा आशा गर्नु अव्यावहारिक हो। सम्भावना यसले विरामीलाई केहि बर्ष लाग्यो, सायद दशकौं सम्म, उनीहरूको मोटोपनाको हालको स्थितिमा पुग्न। त्यसकारण, बोसो रातभरि पग्लिन सक्छ, वा केही महिनामा पनि, प्रयोगकर्ताले डिमोटिभेट र उनीहरूको नतिजाहरूबाट निराश महसुस गर्दछ।
चिकित्सकहरूले एक वर्षको 5% वा बढीको व्यक्तिको शरीरको तौल घटाउने रूपमा क्लिनिक अर्थपूर्ण वजन घटाउने परिभाषा गर्छन्। अध्ययनले देखाउँदछ कि 40०% भन्दा बढि Orlistat प्रयोगकर्ताहरू यो लक्ष्य प्राप्त गर्नुहोस्, यदि उनीहरूले डाक्टर र पोषण विशेषज्ञको पेशेवर सल्लाह अनुसरण गर्दछन्।
अध्ययनले यो पनि देखाउँदछ कि जो व्यक्ति क्यालोरी-प्रतिबन्धित खाना खाइरहेका छन्, नियमित व्यायाम र अर्लिस्ट्याटको प्रयोगको साथ, ओर्लिस्टेट प्रयोग नगर्ने कन्ट्रोल ग्रुपको तुलनामा औसत 5.7-एलबीएस गुमाए। (,,5,6)
(1) ओर्लिस्ट्याट प्रयोग गरेर के फाइदा हुन्छ?
त्यहाँ एक राम्रो संगठित र अनुगमित वजन घटाउने कार्यक्रमको हिस्साको रूपमा Orlistat प्रयोग गर्न को लागी एक महत्वपूर्ण लाभ छ। औषधि शरीरलाई बोसो लिनबाट रोक्नको लागि प्रभावकारी छ, यसैले विरामीले नाटकीय तरिकाले बिरामीले इन्जेस्टेड कुल क्यालोरीको महत्त्वपूर्ण अंश घटाउँछ।
जहाँसम्म, जबकि ओर्लिस्टाट एक वजन घटाउने आहारमा एक उपयोगी थप हो, र उल्लेखनीय प्रभावहरू पैदा गर्दछ, हामी यसलाई जोड दिन सक्दैनौं कि मानिसहरूले यो ड्रगलाई क्रुचको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्न। ती व्यक्तिहरूले उनीहरूको तौल घटाउने कार्यक्रमको आधारशिलाका रूपमा प्रिस्क्रिप्सन वा पूरकमा निर्भर छन्।
केही व्यक्तिहरूले आफ्नो आहार वा व्यायाम स्तरमा परिवर्तन गर्दैनन् र यसको सट्टामा, काम गर्न ओर्लिस्ट्याटमा भर पर्दछ। यद्यपि यी व्यक्तिहरूले आफ्नो वजन घटाउने नतीजाहरूबाट निराश पाउनुहुनेछ।
Orlistat लाभ एक वजन घटाउने कार्यक्रम जुन एक परिभाषित संरचना र स्पष्ट लक्ष्यहरू छन्। यो अत्यधिक असम्भव छ विरामीसँग ज्ञान वा प्रेरणाको साथ उनीहरूको शरीर परिवर्तनलाई मात्र पूर्ण गर्ने।
तसर्थ, एक न्यूट्रिशनिस्ट र प्रशिक्षक भाँडा, र एक सेट आहार र व्यायाम कार्यक्रम को पालन निम्नलिखित जो कोही एक वजन घटाउने कार्यक्रम को लागी आवश्यक छ।
धेरै अधिक वजन र मोटो व्यक्तिहरु लाई लाग्यो कि उनीहरु स्वस्थ खाना र व्यायाम शुरू गर्न को शुरुका दुई हप्ता मा एक महत्वपूर्ण वजन घटाउन को अनुभव - र त्यो भन्दा पहिले उनीहरुले कुनै पूरक वा ओर्लिस्टेट को लागी लागी लागूऔषध परिचय।
यद्यपि, केहि व्यक्तिहरूले उचित डाइट र व्यायाम कार्यक्रमको पालना गर्दा पनि सबै तौल घटाउन संघर्ष गर्न सक्दछन्। अरूले पत्ता लगाउन सक्छन् कि आफ्नो प्रगति प्लेट्स चाँडै प्राकृतिक विधिहरू प्रयोग गरेर। यी व्यक्तिहरूले पत्ता लगाउन सक्दछ कि अर्लिस्ट्याटले उनीहरूलाई यस अवस्थामा फाइदा पुर्‍याउँछ, उनीहरूलाई आफ्नो शरीर परिवर्तनको क्रममा स्थिर वजन घटाउने अनुभव गर्न।
(2) ओर्लिस्ट्याट प्रयोग गर्दाको जोखिम के हो?
ओर्लिस्ट्याट प्रयोग गर्ने विचार गरिरहेका व्यक्तिहरूले ओसारलिट साइड इफेक्टहरूको सूची समीक्षा गर्न केहि समय लिनुपर्दछ वजन घटाउने औषधिको प्रयोगसँग सम्बन्धित। अर्लिस्ट्याट एक शक्तिशाली औषधि हो जुन योग्य पोषण विशेषज्ञ द्वारा मोटो व्यक्तिहरूको लागि योजनाबद्ध क्यालोरी-प्रतिबन्धात्मक आहारको साथ प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको हो।
औषधिको ओटीसी संस्करण प्रिस्क्रिप्शन बिना खरीदको लागि सजिलैसँग उपलब्ध हुन सक्छ, तर कसैले पनि पहिले आफ्नो चिकित्सकसँग कुरा नगरी अर्लिस्ट्याट प्रयोग गर्नु हुँदैन।
क्लिनिकल परीक्षणहरूमा बिरामीहरूलाई जेनिकलको व्यवस्थापन सम्बन्धी २ 27 %ले अन्डरगर्ममेन्टमा तेल डागहरू विकास गरे, २ 24% प्रयोगकर्ताहरूले अनैच्छिक मलको डिस्चार्ज पछि ग्यासको अनुभव गरे, २२% प्रयोगकर्ताहरूले मलको जरुरी अवस्थाको अनुभव गरे, ११% ले उनको वृद्धि देखायो। आन्द्रा चालहरूको संख्या, र f% अनुभवी fecal असंयमता।
धेरै जसो प्रयोगकर्ताहरूको लागि, पखाला पनि औषधीको प्रयोगको सामान्य पक्ष प्रभाव हो, विशेष गरी जब पहिले भारोत्तोलक औषधिको प्रयोग सुरू गर्न।
औषधिमा एलर्जीको प्रतिक्रियाहरू दुर्लभ हुन्छन्, र केही विशिष्ट साइड इफेक्टहरू प्रयोगकर्ताहरूले अनुभव गर्दछन् ओर्लिस्ट्याट प्रयोगको पहिलो केही हप्ताहरूमा निम्न समावेश छन्।
तपाईंको अंडरवियरमा तेल दाग वा दागहरू
फ्याट वा तेल मल
मलमा खैरो वा सुन्तला रंगको तेल
ग्यास तेलको डिस्चार्जसँगै
लूज स्टूल, मल निलम्बन मा वृद्धि, र प्रयोगकर्ताहरु को आफ्नो मल त्याग को नियन्त्रण गर्न असमर्थता
मल त्यागको आवृत्तिमा वृद्धि
मतली, बान्ता, पेट दुखाइ, पखाला, र मलाशय दुखाइ
थकान र कमजोरी, माटो रंगका मल
अन्य कम-सामान्य मुद्दाहरूको बिरामीहरूले अनुभव गर्छन् जब उनीहरू ओर्लिस्ट्याट लिन्छन् तब समावेश गर्दछ।
गम र दाँतको साथ मुद्दाहरू
चिसो जस्तै लक्षण को विकास
फ्लू जस्तो लक्षणको विकास
टाउको दुख्ने र कम्मर दुख्ने
हल्का देखि चरम छाला rashes
प्रयोगकर्ताहरू सचेत हुनुपर्दछ कि यो साइड इफेक्टहरूको एक विस्तृत सूची होईन जुन ओरलिस्ट्याट प्रयोग गर्दा हुन सक्दछ। यदि तपाईंले साइड इफेक्ट वा औषधिमा प्रतिकूल प्रतिक्रिया अनुभव गर्नुभयो भने, एफडीएमा तपाईंको अनुभव १-1००-एफडीए -१800 report मा रिपोर्ट गर्नुहोस्।
5. प्रयोगकर्ताहरूले ओर्लिस्ट्याटको बारेमा के भनिरहेका छन्?
प्रयोगकर्ताहरु द्वारा इन्टर्नेट समीक्षा वरिपरि हेर्दा, दुबै को लागी र औषधी को उपयोग को बिरूद्ध, परिणाम को एक नतीजा को लागी। Orlistat समीक्षा व्यक्तिबाटको दायरा जसले उत्कृष्ट परिणामहरू प्राप्त गरेको थियो जुन साइड इफेक्टको सबैभन्दा खराब अनुभव गर्दछ।
यद्यपि, यस्तो देखिन्छ कि मोटोपना भएका व्यक्तिहरू वा २ over भन्दा बढी बीएमआईको साथ सम्बन्धित धेरै जसो केसहरूसँग लाग्ने औषधिको साथ सकारात्मक अनुभव छ। हामीले सबै सकारात्मक समीक्षाहरू हामीले वजन घटाउने औषधिमा सूचित प्रयोगकर्ताहरूबाट आएका थियौं जुन एक मेडिकल प्रोफेश्नलको हातले शरीर परिवर्तन गर्दै थियो।
त्यसकारण, यी व्यक्तिहरूले आफ्नो वजन घटाउने रणनीति सहि संरचना गरे। उनीहरू सबैले पोषण विशेषज्ञलाई काममा लगाए, उनीहरूको डाक्टरसँग नियमित त्रैमासिक चेकअप गरे, र उनीहरूको चिकित्सा पेशेवरले सल्लाह दिएका डोसिंग प्रोटोकलमा अडिए।
यहाँ हामी वास्तविक अनलाइन Orlistat परिणामहरु को एक उदाहरण हो अनलाइन।
"मेरो नामको रोन, र म मोटो थिएँ जहाँ यसले मेरो जीवनलाई नष्ट गरिरहेको थियो। गतिशीलता विन्डोबाट बाहिर जाँदै, र मेरो स्वास्थ्य बिग्रँदै जाँदा, म मद्दतको लागि मेरो डाक्टरमा फर्कें। कागजातले मलाई एक डाईटियनसँग सम्पर्क राख्यो, र म दिनको लागि मेरो क्यालोरी आवश्यकताहरू बुझ्छु।
Eating-महिना राम्रो खाना खाँदा र हरेक दिन चल्दा, मैले राम्रो नतिजा देखें, तर मेरो प्रगति स्टाल हुन थाल्यो। मेरो डाक्टरले म Xenical (Orlistat) प्रयास गर्ने सल्लाह दिए। मैले यसको धेरै सोचेको थिइनँ, तर मेरो वजन घटाउने दोस्रो दिन पनि औषधि प्रयोग गरेर जारी राख्यो।
एक बर्ष पछि, र म नयाँ व्यक्तिको जस्तै महसुस गर्छु। म मेरो लक्ष्य वजन मा आधा बाटो हुँ, र पाउन्ड बन्द आउन जारी। "
रोन स्वानसन, ज्याक्सनभिल, FL, संयुक्त राज्य अमेरिका।
यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि सबैजनाले यो नतिजा अनुभव गर्दैनन्, तर यो परिणामहरूको राम्रो बेन्चमार्क हो जुन तपाईं आशा गर्न सक्नुहुनेछ जब सबै ठीक हुन्छ।
यस उदाहरणमा, रोनको नतीजा एक इष्टतम परिणाम थियो, तर यसको मतलब यो होइन कि अरू कसैले उही परिणामहरू आफ्नै लागि नक्कल गर्न सक्दैन, यदि तिनीहरूसँग ठीक चिकित्सा पर्यवेक्षण छ भने।
6. ओर्लिस्टाटलाई वजन घटाउने औषधिको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि कुञ्जी टेकवे
मोटोपना देशभरिका अमेरिकीहरूको स्वास्थ्यका लागि खतरा हो। वयस्क, किशोर र बच्चाहरू दुवैमा मोटोपनाको दर बढ्दो छ, अमेरिकाको दक्षिणी र पूर्वी राज्यहरूमा विस्तारै महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित गरेको छ।
मोटोपनाले डायबेटिज, उच्च रक्तचाप, र हृदय रोग जस्ता धेरै पुरानो स्वास्थ्य समस्याहरूको विकासमा डोर्‍याउँछ। सर्तले Americans० देखि-18 वर्ष-उमेर उमेरका सबै अमेरिकीहरूको १ of% को मृत्युको लागि पनि जिम्मेदार छ।
धेरै अमेरिकीहरू उनीहरूको वजन घटाउने कार्यक्रमहरू छिटो पार्न मद्दत पुर्‍याउन ड्रग्स र सप्लीमेन्टहरूतिर फर्कन्छन्। यद्यपि, यी व्यक्तिहरू मध्ये धेरैले आफ्नो जीवनशैली बानी, आहार, र व्यायाम परिवर्तन गर्नका लागि पर्याप्त गर्दैनन् अन्य वजन घटाउने विधिहरूको सहारा लिनु अघि।
अमेरिकीहरूले शरीरको बोसो गुमाउन कुनै छोटो कटौती छैन भनेर बुझ्न आवश्यक छ। सही खाना र व्यायाम बानीको ज्ञान प्राप्त गर्नु तपाईंको शरीरको वजनको पछाडि नियन्त्रण लिनको लागि महत्वपूर्ण छ। सम्भावित हानिकारक वेटलस ड्रग्सको प्रयोगमा सहारा लिनु अघि तपाईको खाने र सही व्यायाम गर्नु राम्रो हो।
तपाईको वजन घटाउने लक्ष्यहरू बारे डाक्टरसँग परामर्श गरेपछि मात्र ओर्लिस्टेट प्रयोग गर्ने बारे विचार गर्नुहोस्। तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई आहार योजनाको लागि योग्य पोषण विशेषज्ञलाई पठाउँनेछ जुन बोसो घटाउन तपाईंको क्यालोरिक आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
ती व्यक्तिहरूले तौल घटाउने कार्यक्रमको प्रयास गरिरहेका छन् उनीहरूले निश्चित गर्नुपर्छ कि उनीहरूले उनीहरूको वरिपरि टोली बनाएको छ यदि तिनीहरूले परिणामहरू हेर्न चाहेका छन्। तपाईंको डाक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, र व्यक्तिगत प्रशिक्षकले तपाईंको वजन घटाउने लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न तपाईंको मार्गमा कुनै पनि अवरोधहरू पार गर्ने उत्तम मौका दिनको लागि तपाईंको समर्थन टोली गठन गर्दछ।
अर्लिस्ट्याट एक राम्रो-ट्यून गरिएको प्रदर्शन इञ्जिनमा जेट ईन्धन थप्न जस्तै हो। जब बिरामीहरूले आफ्नो आहार र व्यायाम बानी नियन्त्रणमा राख्छन्, ओर्लिस्ट्याट जस्ता वजन घटाउने औषधि जोड्दा परिणामहरूलाई तीव्रता दिन्छ।
उनीहरूले ओर्लिस्टेट लिने निर्णय गर्नु अघि, बिरामीहरूले चिकित्सा स्वास्थ्य पेशेवरसँग परामर्श लिनु पर्छ उनीहरूले उपचारको लागि योग्यता मापदण्ड पूरा गर्छन् कि भनेर।
जब Orlistat को साथ प्रयोगकर्ता अनुभव को परिणामहरु समीक्षा, यो परिणामहरु को एक मिश्रित झोला हो। यद्यपि यस्तो देखिन्छ कि ती व्यक्तिहरू जसले एक डक्टरको निर्देशनमा ओर्लिस्ट्याट लिन्छन् र सहि समर्थन टोलीलाई काममा लिन्छन् जुन उनीहरूले खोज्ने परिणामहरू प्राप्त गर्छन्।
फ्लिप साइडमा, त्यहाँ धेरै व्यक्ति छन् ओर्लिस्टेट प्रयोग गरेर भयानक अनुभवका साथ। यो यस कारणले हो कि व्यक्तिहरूको लागि मेडिकल प्रोफेशनलको रेखदेखमा ओर्लिस्टाट लिनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
Orlistat मोटा र अधिक वजन व्यक्ति प्रदान गर्दछ एक एफडीए अनुमोदित संग काउन्टर विकल्प माथि उनीहरूको वजन घटाउने प्रयासहरू बढाउनको लागि।
यो ध्यानमा राख्नु पनि महत्वपूर्ण छ कि औषधि प्रयोग गर्ने सबै बिरामीहरूलाई औषधिको प्रयोगको बखत निरन्तर व्यवहार परिमार्जनको बारेमा शिक्षा आवश्यक पर्दछ।
एन्डरसन जेडब्ल्यू, श्वार्ट्ज एसएम, हौपटम्यान जे, एट अल। कम खुराक orlistat प्रभाव को हल्का देखि मध्यम वजन अधिक व्यक्तिको को वजन मा: एक 16 हप्ता, डबल-अन्धा, प्लेसबो-नियन्त्रित परीक्षण। एन फार्माकोथर। २००;; (० (१०): १2006१-40-१-10२
स्मिथ एसआर, स्टेनलोफ केएस, ग्रीनवे एफएल, एट अल। अर्लिस्ट्याट mg० मिलीग्रामले भिज्रल एडिपोज टिश्यूलाई कम गर्दछ: २ 60 हप्ताको अनियमित, प्लेसबो-नियन्त्रित, मल्टीसेन्टर परीक्षण। मोटापा (रजत वसन्त)। २०११; १ (()): १24 2011 -19-१9०।।
Synephrine HCL पाउडर - फ्याट बर्नर र वजन घटाउने पूरक	Pregabalin को बारे मा तपाइँ सबै कुरा जान्नु पर्छ